China mpanamboatra veneer vita amin'ny alimina vato | Chenyu
Ny veneer aluminium vita amin'ny vato dia manadio tena, ary ny firakotra fluorocarbon dia manana firafitry ny molekiola manokana an'ny KYNAR500, ka ny vovoka entina amin'ny veneer aluminium eo amin'ny tontolo iainana dia tsy azo voaloto mihitsy, noho izany dia madio izy io ary manadio tena.
1. maharitra, tsy mihena,
2. Fiarovana ny tontolo iainana, fisorohana ny afo, porofon'ny hamandoana,
3. Ny karazany, ny lamina, ny loko dia azo namboarina araka ny fepetra takian'ny mpampiasa.
4. Tsara fisaka, fanoherana ny hamandoana ary fanoherana ny menaka
5. fanoherana tsara harafesina, fanoherana ny hamandoana, UV
6. Fireproof tsy mandeha amin'ny laoniny, porofon'ny hamandoana ary tsy mahazaka harafesina, fanamafisana ny feo, fampisehoana insulasi hafanana tsara, fanamafisam-peo tonga lafatra
7. Ny takelaka harato vita amin'ny aliminioma dia manana firafitra voafintina sy zaitra tsy mitongilana, izay tsy mahazaka fiovan'ny loko mandritra ny 20 taona;
8. Tsy misy poizina, tsy misy tsirony, sariaka amin'ny tontolo iainana, azo ahodina 100%
Fampitahana amin'ireo fitaovana hafa
Aluminium dia tena marobe. Raha ampitahaina amin'ny metaly maro hafa dia lanja maivana ary mora ny miasa. Tena mahatohitra ny harafesina izy, mahatonga azy io ho an'ny fampiharana anatiny sy ivelany.
Ny tena zava-dehibe, ny aliminioma dia akora cos sy valin-drindrina izay mendrika ny fampiasam-bola. Raha ny faharetan'ny fiainana lava dia misy ny tontonana perforated aluminium izay maharitra sy maharitra indrindra. Safidy tsara ho an'ny sehatra haingon-trano ho an'ny tabataba mahatohitra sy fanaraha-maso maivana koa ny rindrina.
Ho an'ny endrika, karazany, loko, maodelin'ny takelaka misy perforated aluminium, manana safidy maro ianao rehefa mamolavola. Ary mora ny mametraka izany raha ny momba ny tetikasanao.
Teo aloha: Vato vita amin'ny alim-bary vita amin'ny hazo ala
Manaraka: Vato vita amin'ny alim-pito